I-Best Plate Mouth Bag Placer, i-Filler & Closer (imikhiqizo yenqwaba) Umkhiqizi noMhlinzeki | GAOGE
I-Open Mouth Bag Placer, Filler & Closer (imikhiqizo eningi)
I-GW-550 Automatic Granular Heavy Bag Packaging Machine unit ilungele ngokukhethekile okokusebenza kwe-Granular, okusemaphaketheni yisikhwama sephepha, isikhwama se-PE, isikhwama eselukiwe, uhla lokupakisha luyi-10-25kg, isivinini esikhulu singafinyelela ku-3-8bags / min. Ukusebenza kahle okuphezulu, idizayini ethuthukile elungele izidingo ezahlukahlukene
Ukupakisha okungu-10-25kg, ngomthamo wezikhwama eziyi-1000 / h (ngokuya ngesikhwama esihlukile, impahla eluhlaza)
Ifanele isikhwama sephepha, isikhwama se-PE, isikhwama eselukiwe. Isikhwama sephepha nesikhwama eselukiwe singasebenzisa ukubekwa uphawu kokuthunga (DS-8C). Isikhwama se-PE sisebenzisa ukubekwa uphawu okushisayo (HS-22D). (Isinqumo sokugcina ngokuya ngezidingo zamakhasimende.)
Inqubo yokufaka isikhwama engenalutho itholwe ukuqinisekiswa okubili komtshina. Inqubo yokugcwalisa imisa ngokuzenzakalela lapho kuvela ukuvuza noma kungekho sikhwama esifakwayo.
Okuzenzakalelayo kwesikhwama sokuphakela kuqukethe amayunithi ama-3 avundlile, iyunithi ngalinye lingagcina izikhwama eziyi-100 (isikhwama se-PE), esifanele ukukhiqizwa kwejubane elikhulu.
Ukusebenza okuzenzakalelayo okugcwele.
Isidambisi esiphakathi esingeziwe ku-auger hopper (ongakukhetha), i-air chute (ongakukhetha), ukuvimbela ukusaphazeka komkhiqizo, gqugquzela umphumela wokwehla.
Idivayisi yokudonsa yegesi yokudlidliza yesikhwama esingeyona iphinikhodi kungakhethwa, ukuqeda umoya ophelele kumkhiqizo.
Ukuphepha Nokulawula Idivayisi
Umtshina wokushoda kwesikhwama — njengamayunithi ama-2 ngaphandle kwesikhwama, ukukhanya kwesikhombi kanye nesixwayiso se-buzzer - sekuyisikhathi sokuphakela izikhwama. Lapho amayunithi ama-3 engekho isikhwama — umshini ume ngokuzenzakalela.
Iphutha: umtshina wokuvula umlomo wesikhwama-isikhwama sikhishwe ikhanda le-auger ngokungalungile, yehlisa isikhwama, misa umshini wokulinganisa ngesiginali. Ngemuva kokuthi le nkinga ixazululwe, qala kabusha inqubo yokugcwalisa.
Ukuthunga umtshina ophukile — lapho umshini wokuthunga uthunga ophukile, ukukhanya kwesikhombi kuvuliwe, imisindo yebuzzer, umshini wonke ume ngokuzenzakalela.
Umtshina wokushoda kwentambo — izibani zesikhombi zivulekile ngenkathi uthunga ukushoda kwentambo. Imisindo ye-Buzzer — yisikhathi sokunikezela ngentambo yokuthunga.
Umshini wesikhwama oshisayo ngaphandle kwesilawuli sokushisa okuzenzakalelayo noma umtshina wokushisa ophukile umtshina.
Okufakiwe impahla prefabricated nokwelukiweyo isikhwama (ujenga PP / PE ifilimu)
Usayizi wokwenza isikhwama (500-700mm) x (300-400mm) LXW
Ibanga lokulinganisa 5-15KG
Ukunemba kokulinganisa ± 10G
Isivinini sokupakisha 10-15bags / iminithi (ukuhluka okuncane ngokuya ngempahla yokupakisha, usayizi wesikhwama njll.)
Izinga lokushisa elifanele -10 ° C ~ + 45 ° C
Amandla 220V 50HZ 3Kw
Ukusetshenziswa Komoya 0.5 ~ 0.7MPa
Ubukhulu bangaphandle I-5860x2500x4140mm (L x W x H)
Langaphambilini Okuzenzakalelayo Granular Heavy Bag Impahla Machine
Olandelayo: Umugqa Wokupakisha Umshini Wokugoqa Umlomo we-Granule Ozenzakalelayo
Okuzenzakalelayo Ilayisi Open-umlomo Bag Ukupakisha Machine B ...
Okuzenzakalelayo Usawoti Ukupakisha Machine Open-umlomo Bag B ...